စိတ်ကူးပျော်ရာ: ပုသိမိခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်တွင် အစွယ်ဖြတ်ခံရသည့် ဆင်(၂)ကောင်
ပုသိမိခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်တွင် အစွယ်ဖြတ်ခံရသည့် ဆင်(၂)ကောင်
Myo Aung shared Myanmar Online News's photo.
ပုသိမိခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်တွင် (၂)လအတွင်း အစွယ်ဖြတ်ခံရပြီး သေဆုံးနေသော ဆင်နှစ်ကောင်တွေ့ရှိခဲ့ သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ တရားခံကို မဖမ်းဆီးနိုင်သေးကြောင်
း ငပုတောမြို့ခံများထံက သိရှိ ရသည်။
သြဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့က မြစ်တရာကြိုးဝိုင်းကျောက်ဖျာရွာနားက ချင်းချောင်းထဲမှာ တောင်ကျရေနှင့် သေ၍ မြောလာသည့် ဆင်နှင့်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်က သစ်ပုပ်ကြိုးဝိုင်း အမှတ်(၁၁၄)သဇင်ကွင်း
ရွာအနားတွင် အစွယ်ဖြတ်ခံရပြီး သေနေသည့် ဆင်တွေ့ရ သည့်အတွက် စုစုပေါင်း ဆင်(၂)ကောင် တွေ့ရှိကြောင်း ငပုတော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးက ဆိုထားသည်။
ငပုတောမြို့နယ်သည် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ဆင်အနင်းခံရပြီး
သေဆုံးသောလူဦးရေအမျာဆုံးမြို့နယ် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး
သေဆုံးနေသောဆင်များလည်း မကြာခဏတွေ့ရှိရသော မြို့နယ်ဖြစ်သည်။
လယ်ကွင်းနားမှာ ဆင်တွေရောက်လာလို့အပြင်မထွက်ရဲဘူး၊ အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်တွေက စည်းရှိတယ်၊ လူတွေ စည်းမရှိလို့ ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ”ဟု ငပု တောမြို့နယ်၊ တောင်ချောင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းတွင်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အတွင်းကလည်း ငွေဆောင်မြို့နယ်၊ဥတိုချောင်းအနီးတွင် ဆင် သတ်၊ ဆင်အစွယ်ဖြတ်သောသူများ ဖမ်မိခဲ့ပြီး မကြာမီကျင်းပမည့် တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် အဆိုပါကိစ္စများ အတွက် ဆွေးနွေးသွားဖွယ်ရှိကြောင်းတိုင်းလွှတ်တော်
“အခုဖြစ်နေတာ ဒေသခံတွေက ဆင်သေတွေတွေ့လို့ သွားတိုင်ရင် အာဏာပိုင်တွေက ပြန်ပြီး တိုင်တဲ့သူကို လမ်းပြခိုင်းတယ်၊ တရားခံကို
မမိရင် သတင်းပေးတဲ့သူကို မသင်္ကာပြန်ဖြစ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆင်သေ တွေ့လည်း အကြောင်းမကြားရဲဘူး” ဟု ငပုတောမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းကပင် ဆက်လက်ပြီး ထိုအကြောင်းများကြောင့် ဆင်များမှာ
သတ်ပြီး အမြှုပ်ခံရခြင်း၊ သတ်ပြီးလျှိုများ၊ ချောက်များအတွင်း ပစ်ချခံရခြင်းများရှိသည့်နေရာသို့ တာဝန်ရှိသူများ အရောက်အပေါက် နည်းသည့်အတွက် တစ်နှစ်လျှင်ဆင်ကောင်ရေ မည်မျှ သေဆုံးနေသည်ကို ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြား ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆင်ကောင်ရေ (၅၀၀)ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့ပြီး တရားမ၀င်ဆင်သတ်၊ ဆင်စွယ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါက မကြာမီကာလအတွင်း မြန်မာ့ဆင်များပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ကြောင်း သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 9/26/2012 09:22:00 AM
အိုမင်းမှု့ကို ဟန့်တားပြီး အရွယ်တင် နုပျိုစေရန်
ဟာသပုံလေးတွေပါ~~~~ ၀င်ကြည့်သွားပါအုံး တဲ့
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တရား အရသာများ
ရေကူး ရေစိမ်ချိုး ရေသောက် ရေပက်ဖျန်းရင် ဘာတွေဖြစ်လ...
ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ တရုတ်ပြည်မှ လမုန့်ပွဲတော်နှင့် ပ...
မုသားစကားပြောခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင...
ကျောက်တည်ခြင်းကင်းဝေးရန် သံပရာရည် များများသောက်ပါ
နိဂုံးအထိ ပြုံးနေပေးပါ အမေ.
ဓာတ်တော်ကျဆရာတော် ဦးသာဂရ၏ ပြောင်မြောက်သော အဆိုအမိ...
လက်ရာမြောက်တဲ့ သစ်ရွက် ပန်ပု
လေ့ကျင့်ခန်းမှ ကူညီနိုင်သော ရောဂါများ
အသားအရေ လှပချောမွေ့ရန်အတွက် နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်ငါးမျ...
ဗုဒ္ဓ၀င် ပုံတော်စုံများ (၁)
လပြည့်နေ့ အခါသမယ မှာ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က ဘုရားများ ...
မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့သော ကမ္ဘာနှင့် လူဖြစ်လ...
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နွားမေတ္တာစာ (အပြည့်အစုံ
တရားသိသူများအတွက်ကား .. ဥစ္စာပျောက်တိုင်း ကုသိုလ်ရရ...
သေချာကြည့်ပေးပါနော်၊ သူတို့ မိန်းမလျာတွေပါပဲ။ မထင်...
ပျို့အန်ခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ပျောက်စေသော...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နာရေးကူညီမှုအသင်းအား ငွေလှူဒ...
လှပတဲ့ အသီးအရွက် ပုံဖော်မှုဒီဇိုင်းဆန်းလေးများ
ရေသောက်တာကြောက်ရင် ဒီလိုလေး သောက်ကြည့်ရအောင်
မြန်မာနိုင်ငံမှဒုတိယကမ္ဘာစစ် သမိုင်းဝင်နေရာ - (၂)ခု...
မိမိကြိုက်တဲ့စာလုံးကို 3DAnimation လုပ်မယ်
ပုသိမိခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်တွင် အစွယ်ဖြတ်ခံရသည့် ...
ထူးထူးဆန်းဆန်း ငါးမိုးရွာချသော ရုရှား
ထိုးထားတဲ့ တက်တူးတွေကို ဖျက်ချင်ပါ သလား
စင်ကာပူချန်ဂီလေဆိပ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေဆိပ်အဖြစ်ရေ...
လမ်းပေါ်မှ 3D ပန်းချီကားများ
ကင်းပုံပင် ( Wild Snake Gound )
အိပ်စက်တဲ့အခါ အိပ်မက်တွေ ဘယ်လိုကြောင့် မက်ရတာလဲ (ဗ...
SIM Card ကို Nano Card အဖြစ်ညှပ်နည်း
ဘုရား အနေကဇာတင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်
သဘာဝပစ္စည်းများနဲ့ home masks လေးတွေပါ(မျက်နှာပေါင်...
ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ဂျပန်...
တေးသံသာကြောင့် ရရှိနိုင်သော ကျန်းမာရေးရလဒ်ကောင်းမျ...
လူငယ်များကို ဦးစားပေးသော ဗုဒ္ဓ၀ါဒ
" ဗုဒ္ဓ ဘယ်လို ညွှန်ကြားခဲ့သလဲ " " ဗုဒ္ဓကို ဘယ်လို ယံ...
အထိုင်များသော အလုပ်ကြောင့် စောစောစီးစီး သေဆုံးစေနိ...
“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)
ဥပဒေစိုးမိုးသော ငရဲပြည် (သို့မဟုတ်) ယမမင်း၏ ကယ်ဆယ်...
ဆေးဝါး တစ်လက်ကဲ့သို့ အသုံးဝင်သော ကြက်သွန်ဖြူ
မိမိကွန်ပျူတာ Hangs ရခြင်းအကြောင်း (၁၀)ချက် တဲ့
အသဲးကွဲးတဲ့ အမေ့သား မမှားရအောင်
ဘကြီးလား အဲဟုတ်ပါဘူး ဘာကြီးလဲ
မြန်မာပြည်က ရှားပါးပုံလေးတွေ ထပ်တင်လိုက်ပါပြီရှင်။...
တရုတ်ပန်းချီဆရာ Ju Duoqi ရဲ့ အသီးအရွက်တွေနဲ့ ဖန်တီ...
ရှားပါးတဲ့ မြန်မာပြည်ကပုံလေးတွေ ထပ်လာပြန်ပြီနော်.....
ပုံစံ အဆန်းဆုံး ရှူးဖိနပ်များ
"ခြောက်လသား ခွေးအရှင်လတ်လတ်ကို ငါးမျှားစာ လုပ်""
ကွမ်းသီးခြောက်ထုပ်စားတဲ့ကိုကို တို့ အတွက်နော်
ဥက္ကဌ ဇင်ဝိုင်းကို ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံတော် အလံကို ...
ဆော့ဝဲတွေကိုမြန်မာလိုဖတ်ပြီးဒေါင်းမယ် Android ဖုန်...
ကာလလေးပါးတွင် ဟောကြားခဲ့သော တရားများ
အနုပညာရှင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒ ယနေ့မြန်မာ
Gtalk တွင်ပုန်းတပ်တဲ့Gပုံးတွေသတိထားပေတော့ ဖမ်းလို ...
barbie အရုပ်ကလေးနဲ့တူအောင် ခွဲစိတ်ခဲ့သော မိန်းကလေး...
သင့်၏Laptop ပျက်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
ပိုးသတ်ဆေးမသုံး ... ကွန်ပျူတာဖြင့်သာ “ခြင်” နှိမ်န...
အင်တာနက် 20 % လောက် ပိုမြန်စေချင်ရင်
“တစ်ခါသုံးဝါးတူ” အသုံးပြုခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးဆို...
ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ကြောက်မတ်ဖွယ်ရာ စွန့်စားသူများ။
မီးဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်ပုံပါ... (အရမ်းဆန်းကြယ်လွန...
India မှ ပေါက်ကရပုံရိပ်များ